Fampitandremana momba ny dia any Etazonia, saingy mbola tsara kokoa any Bahamas
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Fampitandremana momba ny dia any Etazonia, saingy mbola tsara kokoa any Bahamas
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Cruising • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • WTN
Ny lisitr'ireo firenena izay ampian'i Etazonia amin'ny lisitra "aza mivezivezy" dia mitombo. Hatramin'ny omaly dia ao koa ny Bahamas.
Mbola tsara sy azo antoka kokoa any Bahamas raha ampitahaina amin'ny fitsangatsanganana any Etazonia maro toa an'i Florida na Louisiana.
Satria ny lisitry ny fizahan-tany toy izany dia tsy mipetraka, ary ny fampitahana ao an-trano dia tsy ao anatin'ny fampitandremana momba ny dia iraisam-pirenena, ny toeran-kafa miankina amin'ny fizahan-tany toa an'i Bahamas dia noraran'ny rafitra amerikana ankehitriny.
Ny Ivotoerana Amerikanina misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina (CDC) dia namoaka fampitandremana momba ny dia an-tongotra 4 ho an'ireo mpitsangatsangana amerikana mikasa ny hitsidika an'i Bahamas.
Mety hisy fiatraikany amin'ny vahiny Disney Cruise Line izay mikasa ny hitsidika ny nosy amin'ny sambo fitsangantsanganana Disney ato ho ato.
Raha avo indrindra ny aretina ao Etazonia, mihena kosa ny any Bahamas, manontany ny fampitandremana ambaratonga faha-4 navoakan'i Etazonia momba ny Bahamas mpifanolo-bodirindrina aminy.
Nanampy firenena 6 tao amin'ny lisitry ny fampitandremana momba ny dia 4 ny CDC androany.
Ireo firenena enina nanampy ny lisitry ny US Do Not Travel dia:
Tena tsara kokoa ve ny mitsidika an'i Bahamas?
Aleo any Bahamas. Io no teny filamatr'ity firenena ity fantatra amin'ny morontsiraka fasika fotsy, rano manga, ary lanitra manga. Ireo busine fitsangantsangananas koa dia ampahany lehibe amin'ny portfolio fizahan-tany ao amin'ity firenena Karaiba ity.
Raha ny marina dia mbola tsara kokoa any Bahamas!
… Fa ny governemanta amerikana kosa dia namela ny ampahany amin'ny hoe azo antoka kokoa raha hitsidika an'i Bahamas raha oharina amin'i Florida na Hawaii. Fa kosa, ny governemanta amerikana dia namoaka fampitandremana tsy hivezivezena amin'ny Level 4 hamelezana ny mpifanolo-bodirindrina aminy 100 kilaometatra miala ny morontsirak'i Florida.
Miankina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ny toekarena Bahamas. Etazonia namoaka an'i Lfampitandremana momba ny dia 4 dia fahadisoam-panantenana lehibe sy fandrahonana ho an'ny firenena nosy sy ireo teratany Bahama 368,000. Betsaka amin'izy ireo no miasa ary miankina amin'ny fahasalaman'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ary ny amerikana no ankamaroan'ny mpitsidika azy ireo.
Ny fampitandremana amerikana momba an'i Bahamas dia mivaky toy izao:
Aza mandeha any The Bahamas noho ny Covid-19. Mitandrema amin'ny faritra sasany any The Bahamas noho ny heloka bevava. Vakio ny Advisory momba ny dia manontolo.
Vakio ny Departemantam-panjakana Pejy COVID-19 alohan'ny handaminana ny dia iraisam-pirenena.
Etazonia Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) dia namoaka a Fampandrenesana momba ny fahasalamana amin'ny dia 4 ho an'ny Bahamas noho ny COVID-19, manondro haavon'ny COVID-19 avo lenta ao amin'ny firenena. Ny mety ho tratran'ny COVID-19 sy ny fitrangan'ny soritr'aretina mahery dia mety ho ambany kokoa raha vaksinina feno amin'ny Vaksinin'ny FDA nahazo alalana. Alohan'ny handrafetana ny dia iraisam-pirenena, dia avereno jerena ireo tolo-kevitry ny CDC manokana momba vita vaksiny ary tsy voadio mpandeha. Tsidiho ny Masoivoho Pejy COVID-19 raha mila fanazavana fanampiny momba ny COVID-19 ao The Bahamas.
Ny toekarena Bahamas dia miankina amin'ny fizahan-tany, amin'ny touri amerikanasts
Mampihomehy fa mamaky ny firaketana rehetra eran'izao tontolo izao i Etazonia miaraka amin'ny areti-mifindra sy fahafatesan'olona vaovao, raha ny isan'ny Bahamas kosa dia mirongatra. Ny isan'ny aretina sy ny antontan'isa momba ny fahafatesana tany Bahamas dia ambany noho ny isa tao amin'ny State of Florida na Hawaii raha jerena raha oharina amin'ny isan'ny mponina.
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'i Etazonia goavambe sy Bahamas kely dia ny fanaovana vaksiny.
raha 33% ny Amerikanina milaza fa tsy hanao vaksiny mihitsy, ary ny ankabeazan'ny ambiny dia vita vaksiny, raha ny vaksiny kosa mora azo any Etazonia, ny Bahamas kely dia tsy nanana vaksinina ampy hanomezana izany ho an'ny mponina iray manontolo. 15.3% amin'ny mponina ihany no vita vaksiny.
Ny fandraisana ireo mpitsidika vita vaksiny dia tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Bahamas
Ny Bahamas dia nitatitra aretina 103 isaky ny olona 100,000 tato anatin'ny 7 andro.
Ny isa toy izany dia maneho ny 37% amin'ny tampon'isa, raha ny Etazonia kosa dia mitatitra ny 59% amin'ireo tampon'aretina.
Mazava ho azy fa ny Departemantam-panjakana amerikana dia nomena baiko hampitandrina ny Amerikanina amin'ny loza any ivelany. Na izany aza, raha miorina amin'ny isa ny fijanonana any Bahamas ho an'ny Amerikanina vita vaksiny dia azo antoka fa azo antoka kokoa noho ny mijanona ao an-trano amin'ny ankamaroan'ny tranga, maninona ny Departemantam-panjakana no maniry ny tsy hampiditra an'io zava-misy io amin'ireo mpanolo-tsain'izy ireo momba ny dia lavitra?
Lack ny fandrindrana manerantany amin'ny fizahan-tany
Ohatra iray hafa izay tsy fisian'ny solontenan'ny fizahan-tany ny tsy fisian'ny fitarihana manerantany amin'ny fizahan-tany, na ny fitarihana manerantany.
Juergen Steinmetz, filohan'ny Networ momba ny fizahantany manerantanyHoy i k: "Ny tsy fahampian'ny fandrindrana sy ny fitarihana eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany no tandindomin-doza lehibe indrindra amin'ny toekarena sy ny fahasalamana."
Toerana azo antoka sy madio ny Bahamas mba hankafizan'ny rehetra.
Tizy Bahamas Board an'ny fizahan-tany dia nanavao ny pejin'ny fahasalamany momba ny dia
Ny fahasalamana sy fiadanam-bahoaka izay miditra na monina ao The Bahamas no mijanona ho laharam-pahamehana indrindra ary ny ezaka fatratra dia ampiharina mba hampihena ny fiparitahan'ny COVID-19. Ireto manaraka ireto ny protokoloka fitsangantsanganana sy fidirana napetraka mba hiantohana ny Bahamas ho toerana azo antoka sy madio ivoahan'ny rehetra.